ဂဇက်အတိုင်ပင်ခံ post ( ၂ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » ဂဇက်အတိုင်ပင်ခံ post ( ၂ )
ဂဇက်အတိုင်ပင်ခံ post ( ၂ )
Posted by alinsett on May 19, 2014 in Entertainment, Environment, History, Q&A, Think Different | 33 comments
ရွာ့အရေးတစ်ခု တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါရစေ… ပိုစ့်… သို့ …
ဂဇက်အတိုင်ပင်ခံပိုစ့်ဆိုပြီး မိမိတို့သိလိုတာတွေ မေးကြဖြေကြ . .
အမေးအဖြေတွေကို ဖတ်ပြီး ဗဟုသုတ ရယူကြတာ. . .
အမေးတွေ အများကြီး အဖြေတွေအများကြီးနဲ့ အတိုင်ပင်ခံပိုစ့်ကြီးဟာ စည်ကားသိုက်မြိုက်ခဲ့ပါတယ် ။
comment တွေ 170 ကျော်နဲ့ ပိုစ့်ဟာ ဝေဝေဆာဆာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး ဖြေ အားပေးခဲ့ကြသူ မြို့သူမြို့သားအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
ပထမဆုံး လုပ်လိုက်တဲ့ အတိုင်ပင်ခံပိုစ့် မှာ comment တွေ အရမ်းများလာလို့ ….
အောက်ဆုံးက comment တွေဟာ တစ်ခုပေါ် တစ်ခု ထပ် ပြီး
ဖတ်ရသူတွေ အဆင်မပြေတော့ဘူးလို့ ယူဆမိတာကြောင့် အဲဒီပိုစ့်ကို ပထမပိုင်းအဖြစ် ထား ထားပြီးး
အခု ဒုတိယမြောက် အတိုင်ပင်ခံပိုစ့်ကို ထပ် တင်ဆက်လိုက်ပါတယ် ။
( ပထမဆုံးအတိုင်ပင်ခံပိုစ့်ထဲက အမေး အဖြေတွေကို ပြန်ဖတ်ချင်သူများ . . .
ပြန်လေ့လာလိုသူများက. . .
ဂဇက်ရဲ့ category တွေထဲ . . .
Myanmar Gazette ရဲ့ အောက်မှာ ရှိတဲ့ ”’ Q & A ”ဆိုတဲ့ category ကို ရွေးပြီး ရှာရင် လွယ်ကူပါတယ် ။ )
အတိုင်ပင်ခံပိုစ့် (၂) ထဲမှာလည်း
သိလိုတာလေးတွေ ဝင်မေးကြပါဦး ။
ဖြေနိုင်သူတွေကလည်း ….သိထားတာလေးတွေ ဝင်ဖြေပေးကြပါဦးခင်ဗျ။
( ထုံးစံအတိုင်း . . . . .comment ထဲမှာ မေးသွား ဖြေသွားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို
post စာမျက်နှာထဲ . . .ကျွန်တော်ပြောင်းထည့်ပေးနေပါ့မယ် ။ )
ဖတ်သူအတွက် အမေးအဖြေတွေဟာ အလွန့်အလွန်အကျိုးများပြီး ဗဟုသုတ ရစေတာမို့ များများမေး များများဖြေကြခြင်းအားဖြင့်
ကျွန်တော်တို့ ဂဇက်မြို့ တော် အကျိုး…
ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးကို သယ်ပို့ကြပါဦးစို့. . .လို့ . . .
လေးစားစွာဖြင့်. . .
16 /5/ 2014 /
ဒါက ပထမပိုစ့်ထဲက… သယ်လာတာ…
Q – ၀င့်ပြုံးမြင့်
အချစ်ရေးကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမည်၊ အထူးသဖြင့် ကွဲကွာရေးကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမည်ဆိုသော မမချွိကို မေးပါရစေ။
ဒီလိုလေ၊ ကိုယ်က မယားကြီးနေရာကဆိုပါတော့၊
ကိုယ့်မှာက သားတစ်ယောက်လည်းရှိပြီ၊ ပြည်ပကိုလည်း ခဏတဖြုတ်ရောက်နေတယ်။
အိမ်ထောင်သက်ကလည်း ဘာမှ မကြာသေးဘူး။ မြန်မာပြည်က ကိုယ့်ယောက်ျားက နောက်တစ်ယောက်နဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ မယားကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်က ဒီလိုကြီးပေါ်တင်စော်ကားခံရပြီဆိုတော့ မကျေနပ်ဘူး။
သတင်းစာမှာ ဘာညာကွိကွ ထည့်လိုက်တယ်။
ကိုယ့်ယောက်ျားကတော့ သူ့မိဘတွေဆီက အမွေဖြတ်ဆိုတာလုပ်ပြီး နောက်အိမ်ထောင်ထူဖို့ လုပ်လိုက်ပြီ။
အဲဒီမှာ ယောက်ျားက အမွေဖြတ်ဆိုတာ လုပ်လိုက်တော့ ပါရင်းပစ္စည်းဆိုတဲ့အပိုင်းက မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။
လင်မယားကွဲရင် လင်ရဲ့ ပါရင်းပစ္စည်း (သူ့မိဘအမွေ) သုံးပုံတစ်ပုံ မ်ိန်းမက ရတယ်လေ။
လောလောဆယ်မှာ သူက အမွေဖြတ်လုပ်ချလိုက်တော့ မယားကြီးက ပါရင်းထဲက ဘာမှ မရတော့ဘူးလား။
တကယ်တော့ ဒီအမွေဖြတ်ဆိုတာချည်းကလည်း တရားမ၀င်တော့ သူ့မိဘတွေ သေပြီးရင် အမွေက သူပဲပြန်ရမှာလေ။
အဲတော့ ယောက်ျားရဲ့ ပါရင်းပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာ နောက်မယားကသာ အကျိုးကျေးဇူးခံစားခွင့်ရှိသွားတော့မှာပေါ့။
နောက်မယားအနေနဲ့ အမွေမမက်ဘူးဆိုတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာလည်းရ၊ ပစ္စည်းလည်းရ၊ အဲဒီလိုဖြစ်မကုန်ဘူးလား။
တကယ်တော့ ကိုယ်လင်တစ်ယောက်ရဖို့အတွက် သူများ အသိုက်အမြုံကို ဖြိုခွဲနိုင်တဲ့သူ၊
မိန်းမသားချင်း ကိုယ်ချင်းမစာတဲ့သူ ဟာ နဂိုအခံမှာ မက်ပြီးသားပါ။
အဲတော့ မမချွိသာ မယားကြီးနေရာမှာဆိုရင် ကွာမလား။
A – ကေဇီ
ဝင့်။ ဒါက အချစ်ရေးဟုတ်ဘူးလေ။
ကြားရတာတော့ ခုလတ်တလောခေတ်စားနေတဲ့ ဟိုမင်းသမီး ကိပ်စနကို အမှတ်ရစေတယ်။
ကျနော့စိတ်နဲ့ ဆိုရင်တော့ အဲဒီ အချိန်မှာဖစ်နေတဲ့ မုဒ် အတိုင်းလုပ်မယ်ဗျ။
ပြည်ပမှာ ခဏတဖြုတ်ဆိုတာ အလည်လားးး
အလုပ်လုပ်နိုင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဘာပဲပြောပြော အဲဒီ အကြီးအနေနဲ့ အရည်အချင်းလေး ရှိပြီးသားလို့ မှတ်ပါတယ်။
ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်
အချိန် တို အတွင်း အောက် ဆော့တတ်တဲ့ ယောက်ကျားကို ဆက်ပေါင်းဖို့တော့ အားမပေးချင်။
သူများ အသိုက်အမြုံခွဲသူဟာ သူ့အကျိုးပေးနဲ့ သူသွားမှာမို့ မခံချင်စိတ်နဲ့ တွယ်ကတ်နေမဲ့အစား လက်လွှတ်လိုက်တာကောင်းမလားလို့ပါ။ (ကိုယ့် အရွယ်လည်းရှိတုန်းဆိုရင်ပေါ့။)
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ့်သိက္ခာဟာ လက်လွှတ်လိုက်မှ တက်သွားတာတာ။
ဆွဲထားဖို့ ကြိုးစားရင် သိက္ခာမတက်တဲ့အပြင် အရှုံးသံသရာလည်တတ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
မြန်မာမှာ ဘာ တောက်တလွဲ အတွေးမှန်းမသိဘူးဗျ။
ယောင်္ကျားက ပစ်သွားခံရရင်ကို အဲဒီ မိန်းမအပြစ်လို့ အသုံးမကျဘူးလို့ပြောတတ်ကြတာ။
ဒီ ယောင်္ကျားကို မြဲအောင် မဆွဲထားနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့လေ။ အမှန်တော့ ရှက်တတ်ရင် အဲလို ဖောက်ပြန်တဲ့ သစ္စာဆိုတဲ့ အမှန်တရားကို ဖောက်ဖျက်တဲ့သူမျိုးကသာရှက်ရမှာဖြစ်ပြီး
သစ္စာအဖောက်ခံရတဲ့ သူက လုံးးးးဝ လုံးးးးဝ ရှက်စရာမလိုပါဘူးးးလို့ မြင်ပါတယ်။
စကားမစပ် ကျော့် ငယ်ချစ်အူး ..ဂူဒမ်ဂဒမ် စိကလက် ရန်ကုန်မြို့ ဘယ်မှာ ၀ယ်လို့ ရသလဲ ဟင်င်င်
မခင်အေး ရော ဘားလမ်းရော အကုန် သွားခဲ့ပီးဘီ …
ဖြစ်နိုင်ရင် ဗူး ဒီဇိုင်းလေးပါပြနိုင်ရင်ပိုကောင်း
ဖက်ကြမ်း ဆေးပေါ့လိပ်ပဲ သောက်တယ်
နှုတ်ခမ်းမှာ စွဲကျန်ရစ်တဲ့ ချိုရှရှ အရသာလေးရယ်…
ဗန္ဓုလလမ်းပေါ်က… ရှားမီးဘက်အခြမ်း… အခု Tokyo Donuts နားက ဆေးလိပ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာ…
လွန်ခဲ့တဲ့ (၄)ရက်လောက်က တွေ့တယ်…
၀ယ်တော့ ၀ယ်မလာပဲ နဲ့ …။
အော် ဒေါ်ရိုစီရယ်…နိငယ်ချစ်ဦးမှန်းမသိလို့ပါ…ပီးခဲ့တဲ့အပါတ် က ဂျာကာတာအစည်းအဝေးကပြန်တော့
သိခဲ့ရင် နိကို လက်ဆောင်ပေးပါတယ်…
ဒီကလူတွေတော့ လေးညှင်းနံ့နဲ့ စီးကရက်ကို တစ်လိပ်ကုန်အောင်မသောက်နိုင်ကြဘူးဗျ…
ဒီတစ်ခါတော့ အိမ်ခြံမြေနဲ့ပတ်သက်တာလေး မေးချင်ပါတယ်။
အိမ်ခြံမြေ ၀ယ်တဲ့အခါမှာ ရောင်းသူနာမည်နဲ့ ဂရံအမည်ပေါက်ကို ၀ယ်ရင် ဂရံမှာ ချက်ချင်း ၀ယ်သူနာမည်ပြောင်းလို့ရပေမယ့် အမည်ပေါက်မဟုတ်ပဲ Special Power, General Power ရသူထံကတစ်ဆင့် ပြန်ဝယ်ရင်လည်း သိပ်တော့ မခက်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် G.P ရထားသူထံက ၀ယ်ရာမှာတော့ G.P သက်တမ်းက နှစ်အနည်းငယ်ပဲရှိတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ General Power သက်တမ်းက နှစ်အနည်းငယ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ ဟုတ်တယ်ဆိုရင် ၀ယ်စဉ်က ရောင်းသူရဲ့ General Power သက်တမ်းရှိပေမယ် လအနည်းငယ်အကြာမှာ သက်တမ်းကုန်သွားတော့ အခုချိန်မှာ လက်ရှိဝယ်ထားသူရဲ့ အမည်ပေါက်လုပ်ဖို့အတွက် ဘာတွေလိုအပ်မလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သိချင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက အရပ်စာချုပ်နဲ့ အဆင့်ဆင့်ရောင်းဝယ်ထားတဲ့ အိမ်ခြံမြေကို ၀ယ်သူအမည်ပေါက်လုပ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ။ ခေတ်အခြေအနေနဲ့လျော်ညီအဆင်ပြေတဲ့နည်း ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
တိုက်ခန်းနဲ့ မြေ ဥပဒေက နဲနဲတော့ကွာသဗျ…
တိုက်ခန်းက အခန်းကိုပဲပိုင်ပြီး မြေမပိုင်တော့ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ မှတ်ပုံတင်၊ အခွန်ဆောင်ဝယ်လို့မရဘူး… အခု တိုက်ခန်းဥပဒေထွက်လာတော့ ဘယ်လိုဖြစ်သလဲမသိ…
၁၉၇၄ ခုနှစ်ထင့် မြန်မာနိုင်ငံမြေယာဥပဒေအရ…
မြို့မြေ၊ လယ်ယာမြေ၊ ဥယာဉ်ခြံမြေ၊ သာသနာ့မြေဆိုပြီး ခွဲထားတာရှိပါတယ်…
အဲဒီတော့ ကိုယ်ဝယ်မယ့်မြေက ဂရံအမည်ပေါက်ဖြစ်ပြီဆိုရင် အရင်ဆုံးရန်ကုန်မှာဆို စည်ပင်…
နယ်မှာဆိုရင် မြို့နယ်မြေစာရင်းဦးစီးဌာနကိုဆက်သွယ်ပြီး တရားဝင်စာချုပ်ချုပ်ရပါတယ်…
SP တို့ GP တို့မှာ သက်တမ်းရှိသေးရင် Attach တွဲပြီးတော့ တရားဝင်ဝယ်လို့ရပါတယ်…
၀ယ်ယူစာချုပ်အတွက် အစိုးရကို အခွန်ငွေ ၁၅% ဆောင်ရပါတယ်…
၁၅% ကောက်ခံဖို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနကနေပြီးတော့ ရာဖြတ်အဖွဲ့လာပါတယ်…
သူတို့ဖြတ်တဲ့ဈေးရဲ့ ၁၅% ဆောင်ပြီးမှ အဲဒီမြေကို လွှဲပြောင်းခွင့်ရှိပါတယ်…
အဲလိုလွှဲပြောင်းလိုက်တော့မှ ဂရန်မှာ ကိုယ့်နာမည်ပေါက်ပြီးတရားဝင်ဖြစ်ပါတယ်…
တကယ်တန်းပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားရင် တရားရုံးက အရပ်စာချုပ်ကိုတရားဝင်အဖြစ်လက်မခံပါဘူး…
အဲဒီတော့ မြေ၀ယ်မယ်ဆိုရင် ၁၅% အခွန်ဆောင်ပါ…
ဂရံမှာ ကိုယ့်နာမည်ပေါက်ထွက်ပါစေ… ဒါဟာ မြေယာဥပဒေအရစိတ်အချရဆုံးပါ…
ဂရံမှာ သူများနာမည်ပေါက်သ၍ ကိုယ့်မြေဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါဘူး…
၁၅% ပေးလိုက်ပါ… စိတ်ချလက်ချဖြစ်ရအောင်လို့ပါ…
ခေတ်အခြေအနေနဲ့ လျော်ညီပြီး အဆင်မပြေဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ပိုက်ဆံများများဆောင်သွားဖို့ပါပဲ…
ပန်းစံပယ် မေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေက ကျမအတွက်လည်း သိပ်ကို အရေးကြီးနေတယ်။ သိနားလည်သူများ ကျေးဇူးပြု ပြီး ဖြေကြားပေးကြပါရှင်။
ကျော်လည်း အဲ့ဒီ အိမ်ခြံမြေနဲ့ပတ်သက်တာလေး ဂဃနဏ သိချင်ပါတယ်…မြေကွက်အရောင်းအ၀ယ်ကိစ္စလေးရှိလို့ပါ…
ကျွမ်းကျင်သူ အဆင့် တစ် ဦးဦးပါကို သံကြိုးရိုက်ခေါ်ပါရန်။
IT နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကော မေးလို့ရမလား။ ရတယ်ဆိုရင် မေးချင်တာလေးတွေရှိလို့ပါ။
မေးဗျာ …သိသမျှ ဖြေပါ့မယ်
တခုတော့ သတိထား .. မောင်ဂီ ဆိုတဲ့ တယောက်ကို …
အဲ့ဘဲ က ရုပ်တည်နဲ့ ကြပ်တတ်သတဲ့ …
ကိုယ်ဒွေ့ကိုယ်ဒွေ့ 
အမည်ပေါက်ကိစ္စကတော့ အစ်မတစ်ယောက်လည်း ခုလောလောဆယ်ပြသနာတက်နေလို့ နားစွန်နားဖျားတော့ကြားမိသား… ဂရံထဲက အမည်ပေါက်တွေက သေသူသေ.. ကျန်သူကလည်း လည်းမလိုက်ပေး..စပယ်ရှယ်တွေ..ဂျနရယ်ပါဝါတွေမပေးလို့…နောက်ဆုံးသူတို့ ရှေ့နေနဲ့တိုင်ပင် ရတဲ့နည်းနဲ့လုပ်လိုက်ရတယ်.. ပိုက်ပိုက်လည်းတော်တော်ထွက်သွားတယ်..
မေးချင်တာကတော့ viber မှာ old message တွေ (ဥပမာ – 10 ရက်လောက်ကြာသွားတဲ့ message တွေ)
Load လုပ်လို့မရတော့လိ်ု့ပါ။ No more message to load ဆိုပြီးတော့ပဲပေါ်နေတယ်။
Message ကို delete လည်းလုံးဝမလုပ်ရသေးပါဘူး။ ဖုန်း memory နဲ့များဆိုင်မလားမသိဘူး။
အဲဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဘယ်လိုပြန် load လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတာကို ကျွမ်းကျင်တဲ့သူများဖြေပေးကြပါအုံးနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
ကိုယ်တွေက ပန်းသီးနဲ့ စကိုက်ဆိုတော့….
စက်ရုပ်နဲ့ ဗိုက်ပါ သိဝူးကွယ်…
ပန်းသီးဆိုလို့ပြောရဦးမယ်.. တစ်ခါတုန်းကများပေါ့.. (သိပ်မကြာသေးခင်ကပေါ့လေ) ပန်းသီးဖုန်းသုံးတဲ့သူတစ်ယောက်က သူ့ဖုန်းက သိပ်အဆင့်မြင့်တာတဲ့ (တစ်ကယ်တော့ ချစ်သူများနေ့မှာ လက်ဆောင်ရထားတဲ့ စက်ရုပ်ကို လွှင့်ပြစ်ပြီးယူထားသူတစ်ယောက်ကပြောတာ) အားလုံးဖျက်ထားတယ်တဲ့၊ ဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့။ ကျုပ်ကိုပေးထားလို့ နာရီဝက်ကြီးများကြာအောင်တောင် အတော်ပြန်ဖော်လိုက်ရတယ်။
ပုံတွေ၊ sms တွေ၊ စာတွေ၊ ဖုန်းအ၀င်အထွက်တွေ တစ်ခုမကျန်အောင် အချိန်၊ နာရီအတိအကျနဲ့ ပြန်ပေါ်ပါရော့လား။ ပန်းသီးဆိုတာ တစ်ခြမ်းအကိုက်ခံထားရတော့ အကောင်းအတိုင်းမရှိပေမယ့် ကျန်တာလေးတော့ စားလို့ရပါသေးတယ်ဗျာ။
ကျုပ်သိပ်မုန်းသွားတဲ့အထဲမှာ ပန်းသီးလဲပါတယ်။ သူ့ကိုယုံပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ်ကြတာတွေလဲရှိပါ့။
(မြင်မိလို့ ၀င်ပွားတာ၊ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး)
ဖုန်းရဲ့ memory နဲ့တော့ မဆိုင်လောက်ဘူး ထင်တယ်
Viber ရဲ့ setting ထဲ ဝင် ကလိရမယ်ထင်တယ်
သေချာ ပြောပြနိုင်သူများ လာပါလိမ့်မယ်
ကျနော်တွေ့ဖူးတာတော့ viber message (အဲ) conversation မှာပေါ့လေ
တစ်ဖက်က ဖျက်တာနဲ့ နောက်တစ်ဖက်မှာပါ ပျက်သွားတာ တွေ့မိတယ်ဗျ။
အဲဒါကြောင့်မို့ တစ်ဖက်ကိုပြန်မေးကြည့်ပါလို့ အကျန်ပေးချင်ပါကြောင်း
သိသလောက် မှတ်သလောက် တွေ့မိသလောက် ဝင်ပြောပါရစေဗျို့
ဟုတ်ကဲ့ ဖြေဘာ့မယ်… ဟိုဘူဇွာ အရင်းရှင် ခရိုနီ အိုင်ဖုံး သုံးသူဂျီး ကမဖြေတော့လည်း..
Createabackup file of your messages
We know how important your message history is to you. If you would like to createabackup file for your messages, you can do so easily by following the steps below.*
Select Calls and messages (on Android 4.2 and above)
Once the backup file is created, select the application through which you would like to email it and send it to yourself or any other email
*Messaging history backup is available on Android and iPhone only. Please note that backed up history cannot be restored onto your device.
အဲ့လာနဲ့မှ မကျေနပ်သေးရင် ဒီမှာ သွားဖတ်နိုင်ပါကြောင်းရယ်
ဂီဂီဖြေထားတာက msg တွေကို backupပြန်လုပ်နည်းပေါ့ ….အဲဒီလို backup ပြန်လုပ်ဖူးပါတယ်…အခုသိချင်နေတာက msg တွေကို လုံးဝdelete မလုပ်ဘဲနဲ့ သူ့ဟာသူ overwrite လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုး auto ဖြစ်ဖြစ်နေလို့ပါ (ဥပမာဆိုရင် msg ဘယ်လောက်အရေအတွက်ရောက်ရင်auto delete or overwoverwrite ဖြစ်ဆိုပြီး option တစ်ခုပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာ…..)တကယ်တော့ viber setting ထဲမှာအဲဒီ option မရှိဘူးလေ….viber desktop နဲ့တွဲသုံးလို့ ဦးမာဂပြောသလို တစ်ဖက်ကဖျက်လို့ ဒီဖက်ပါဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်ကလည်း desktop နဲ့တွဲမသုံးပါ….တော်တော်စဉ်းစားရခက်နေလို့ပါ….သိသူများဖြေပေးကြပါအုံးနော်…..
overwrite ရဲ့ သဘောတရားမှာ သည်လို ရှိပါတယ်ဗျ။
၁။ Appli Mgmt to Records
အဲ့ဒါကတော့ Records တွေကို Application က ထိန်းချုပ်တဲ့ အပိုင်းပါ။ Space ကို ဘယ် အရွယ်အစားထိပဲ ထားပေးမယ် ဆိုတဲ့ ထိန်းချုပ်မှုပေါ့..။
Viber ရဲ့ Support Page မှာ ဖတ်ကြည့်တာတော့ Text Message မှာတော့ ဖော်ပြထားတာ မတွေ့ရပေမယ့် Voice Message မှာတော့ 150MB လို့ပဲ ရေးထားသဗျ။
သေချာတာတခုကတော့ Text ရော Voice ရောပါ တူညီတဲ့အချက်က တခါ Delete လုပ်ပြီးရင် (Overwrite ပဲဖြစ်ဖြစ်
manual ပဲ ဖျက်ဖျက်) ပြန်ခေါ်လို့ မရတာပါပဲ။
http://support.viber.com/customer/portal/articles/1354554-making-changes-to-your-viber-settings-android-#Email message history
၂။ OS Mgmt to Appli
အထူးသဖြင့် Android တွေမှာ လုပ်လို့ရတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်.. ။
OS ကနေပြီး Application ကို ပြန် Manual ဆန်ဆန် ထိန်းချုပ်တဲ့ နည်းပါ ။
(အဲ့သည့်လို ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ OS ဘက်တော်သား resource management Apps တွေတောင်ရှိပါတယ်)
ဖုန်းရဲ့ memory အနေအထား အရ ဘယ် Apps ကိုတော့ဖြင့် ဘယ်လောက်ထိပဲ
သုံးဖို့ limit လုပ်တာ မျိုးတွေပါ….။ ဒါကိုတော့ အတိအကျ မပြောနိုင်ပါဘူး
ဖုန်းအမျိုးအစား OS အမျိုးအစားနဲ့ ထည့်သွင်း processor, memory စတာတွေကွာခြားတာမို့
တလုံးနဲ့ တလုံး ကွာခြားမှာမို့ပါ။
သတိချပ်ဖို့က Viber ဟာ instant messaging voice-over-Internet Protocol application ဖြစ်ပါတယ်
Mail service တွေလိုမျိုး Cloud space ကိုသုံးလို့ … အဟောင်းတွေကို Archive လုပ်ထားပေးပါ့မယ်ဆိုတဲ့
Function မပါဝင်နေပါဘူး (အတိုင်းတာတခုထိတော့ သိမ်းပေးနေပေမယ့်)
သည်တော့ အရေးကြီးအချက်အလက် ပါဝင်တဲ့ Text & Voice ကို သီးခြား တနေရာမှာ သပ်သပ် သိုမှီးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
P.S အပေါ်က သိကြားပြောသွားတာက လူတဦးတည်းက Phone & Desktop ၂မျိုးသုံး ပုံစံကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲ
Friend A & Friend B ရဲ့ conversation မှာ A က ပို့တယ် B က လက်ခံတယ်
နောင်တချိန် A က ပို့ပြီး မက်စိအဟောင်းမို့ ကြာလို့ ဖျက်လိုက်တယ် ဆို B ဘက်က မဖျက်ရသေးတောင်
အနှီ မက်စိ ကိုပြန်ခေါ်လို့ မရတော့ မပွင့်တော့ဘူး လို့ ဆိုလိုချင်တယ် မှတ်ပါတယ်။
ကျနော်ပြောတာက friend A & friend B’s conversation ကို ဆိုလိုရင်းပါဗျို့
အဲလိုမျိုးက မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ viber page မှာတော့တွေ့တယ် သကြားရေ။ တွေ့မိတယ်ဆိုတာ ဘယ်မှာတွေ့မိတာလဲမသိဘူး။ ကိုယ်တိုင် ကြုံဖူးတာလားလို့ပါ..။ ခုဟာက overwrite လုပ်သလိုမျိုးဖြစ်နေတာ..။ ဟိုဘက်က old message မို့ဖျက်တာဆိုရင်တောင် တနေရာမှာ ရပ်နေရမယ်လေ..။ ခုဟာက msg အသစ်တွေပို့တိုင်းပို့တိုင်း (ဥပမာ အသစ်တစ်ခု ပို့ရင် အဟောင်း တစ်ခုက ပျောက်တယ်.. အဲလိုဖြစ်နေတာ.. ဒီနေ့msg 10 ခု ပို့ရင် ဟိုဘက်မှာ 10 ခုစာပျောက်သွားရော)
Back up ပြန်လုပ်ကြည့်ပါအုံးမယ်။ သေသေချာချာဖြေပေးကြတာတွေကို ကျေးဇူးပါနော်။
ဟိုလေ . . .
အဲဒိ Viber app ရဲ့ version ကို
မြှင့်ကြည့်ရင်ရော. . . .
Version နိမ့်တဲ့ app နဲ့များ သုံးနေမိလို့လားလို့
ကျန်းမာရေးအတွက် နှစ်ပြန်ကြော် မစားသင့်ဘူးလို့ ဖတ်ထားဖူးပါတယ်။ အဲဒါ ဆီကို ပြောတာလား။ ကြော်ထားတဲ့အစာကို ပြောတာလား။ မနက်ပိုင်း ငါးကြော်တယ်ဆိုပါစို့။ ငါးကြော်ထားတဲ့ ဆီ ကျန်မယ်။ ညနေကျတော့ အဲဒီငါးကြော်ကို ဆီအဟောင်းနဲ့ ပြန်မကြော်ဘဲ ဆီအသစ်နဲ့ ကြော်ရင်ကော နှစ်ပြန်ကြော် ဖြစ်နေပါသလား။
ဒင်ဒရိုဘီယမ် သစ်ခွပင်ပေါက်စလေးတွေ ၀ယ်ချင်ရင် ဘယ်မှာသွားဝယ်ရပါ့မလဲ။ အပင်ကြီးမဟုတ်၊ ပျိုးပင်ပေါက်လေးတွေ ၀ယ်ချင်တာပါ။ ရန်ကုန် မင်းဓမ္မလမ်းမှာ သွားရှာကြည့်တော့ အရင်ကလို မဟုတ်တော့ဘူး။ ဆိုင်တွေသိပ်မတွေ့တော့ဘူး။ ဘယ်မှာများ ရနိုင်သလဲ မသိဘူးနော်။
အတိုင်ပင်ခံ ခေတ် မဟုတ်တော့ဘူးလား…လို့ …